China L'Oreal Royal Golden Supplement Ude PR onyinye ngwugwu ndị na-emepụta ya na ndị na-eweta ya. | BXL
L'Oreal eze ọla edo emeju ude ngwugwu onyinye
Na mbido ịmalite ngwaahịa a, ndị ama ama ga-enyere aka na nkwalite ahụ, yabụ ihe mbụ ị ga-atụle mgbe ị na-ahazi ngwugwu bụ otu esi adọta ma masị ndị ọrụ na anya na mmetụ aka, wee gosipụta ebe ahịa a na-ere.
Dika ihe ndi ahia choro ma dabere na uru ahia, BXL Creative guzobere otu ndi oru oru ngo maka L'Oreal wee gbaga Shanghai otutu oge ka ha na ndi nkuzi. Ha duziri ihe dị omimi nke ngwaahịa a, na-elekwasị anya n'echiche atọ dị iche iche: imetụ aka, nkwụsi ike, na oke.
Packagingrụ ọrụ nkwakọ ngwaahịa dị mma ga-emerịrị ndị mmadụ chọrọ imetụ aka na ịzụta. Dabere na uru nke ndị mmadụ dị elu, onye mmebe ahụ mezigharịrị usoro isiokwu a: echiche dị elu, ogo ogo, na-adọrọ mmasị, pụrụ iche, ọmarịcha, ngosi ngosi.
Ngwaahịa nke igbe onyinye PR a, mmanụ a honeyụ mmanụ a honeyụ, na-eji Manuka nectar dị oke ọnụ iji gosipụta isi ahịa nke ngwaahịa ahụ.
Ekwesịrị ịkọwapụta ọrụ dị mma magburu onwe ya, na nkwakọ ngwaahịa dị n'ime na nkwakọ ngwaahịa dị na mpụga kwesịrị ịdị na-adabara.
A na-eickedomi ụdị igbe ndị dị n'èzí site na a beeụ, na-akụzigharị ma na-egosipụta njirimara arụmọrụ dị elu nke ngwaahịa ahụ, na-eme ka ihe ngosi na-ahụ anya na nkọwapụta, ma na-egosipụta ntụgharị ihu igwe dị mma nke ngwaahịa ahụ.
Styledị Obí, na-acha ọla edo na-egbuke egbuke, ihe mkpuchi arc sheek mara mma, elu nke igbe onyinye ahụ nwere ikike nke atụmanya. Ime ahụ nakweere ngwaahịa dị oke ọnụ ahịa na imepụta ihe dị oke egwu: ụkpụrụ ejiri mmanụ a honeyụ wee jikọta ya na Manuka okooko osisi na mmanụ a honeyụ, jikọtara ya na ọkụ maka ngosipụta kachasị mma.
Nke gara aga: ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka igbe egosiputa ebipụta - Eke etemeete - BXL Creative Packaging
Osote: L'Oréal's Age Zuru okè deluxe skincare PR Giftset Packaging Design
Imepụta Ngwa Ngwa na Emeputa
Ihe eji eme ihe na ngwa okike